प्रश्नः COPOMiS सम्बन्धि सहकारी संस्थाको समस्याको लागि सहकारी बिभागमा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः COPOMIS सम्बन्धि केहि समस्या आई परेमा सहकारी बिभागमाको email ID –sahakaribivag@gmail.com र फोन नं. ०१-४४६५३६२, ४४६११७७ माफक त सम्पर्क गरी गर्न सकिन्छ ।
प्रश्नः Unicode बाहेक अन्य Font (Preeti, Fontasy, Himalli, Khaki etc) मा प्रबिष्टि गर्दा के हुन्छ ?
उत्तरः Unicode बाहेक अन्य Font जस्तै (Preeti, Fontas Himalli, Khaki etc.) मा प्रविष्टि गर्दा System ले Accept गरेपनि बिबरण नबनिएर अपलोड हुनेसमस्या हुने हुदा सुरुबाटैUnicode प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
प्रश्न: COPOMIS को Password कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ?
उत्तरः सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आफ्नो नियामक निकायमा सम्पर्क गरी पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्दछन् ।जस्तै सहकारीको कायकक्षेत्र स्थानीय तह भित्र मात्र रहेमा सोही स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछन् ।
प्रश्न: COPOMIS को User ID सहकारी संस्थाकै आधिकारिक हो भन्ने कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले कुनै नियामक निकायबाट पासवर्ड प्राप्त गर्दा उपलब्ध गराईएको चिठी मा युजरनेम र पासवर्ड उल्लेख भएको हुने गर्दछ । उक्त चिठीमा भएको ईमेललाई संस्थाको आधीकारिक ई-मेल संग भिडाई रुजु गर्न सकिनेछ। यदि फरक परेमा आफ्नो नियामक निकायलाई ईमेल परिबर्तन गर्न लगाउनु पर्दछ । कोपोमिस प्रयोग गर्दा use हुने User Name संस्थाको आधीकारिक हुनुपर्दछ ।
प्रश्न: COPOMIS सफ्टवेरमा कर्जा सुरक्षा कोष (Loan Loss Provision ) राख्नु पर्छ कि पर्दै होला ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको कर्जा सुरक्षा कोष (Loan Loss Provision) COPOMIS सफ्टवेरमा प्रविष्ट गर्दा उक्त मासिक विवरण नियामक निकायले तोकेको समयभित्र सफ्टवेरको अनुसुचि -३ मा अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्दछ ।
प्रश्न: आफ्नो सहकारी संस्थाको User Name के हो भनी कसरी थाहा पाउन सकिन्छ?
उत्तरः सम्बन्धित निकायवाट COPOMIS को User Id र Password प्राप्त गर्दा प्राप्त पत्रमा संस्थाको User ID दिईएको हुन्छ र लगइन भईसके पछि सफ्टवेरको Title Bar मा पनि हेर्न सकिन्छ ।
प्रश्न: नियमक निकायबाट प्राप्त पत्रमा COPOMIS को User ID संस्थाको आधिकारीक Email-ID नभएमा के गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः सम्बन्धित नियमक निकायवाट प्राप्त पत्रमा संस्थाको आधिकारीक Email-ID नभएमा सम्बन्धित नियमक निकायमा सम्पर्क गरी आफ्नो संस्थाको आधिकारीक Email-ID परिवर्तन गर्न निवेदन दिनु पर्दछ । यदि नियमक निकायवाट गर्न नसके मा सहकारी विभागमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न: यदि संस्था घाटा गएमा सस्थाको संचालन घाटा (Operating Loss)कहाँ राख्नु पर्दछ?
उत्तरः संस्थाको संचालन घाटा (Operating Loss) अनुसूचि १४ को हिसाब नं. १४०.१ पुर्ब संचालन खर्च हिसाब खातामा प्रबिष्ट गर्नुपर्दछ ।
प्रश्न: सम्बन्धित नियामक निकाय कसरी पत्ता लगाउने?
उत्तरः सहकारी संस्थाको विनियममा उल्लेख भएको कार्यक्षत्रको आधारमा नियाकमक निकाय पत्ता लगाउन सकिन्छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तह भित्र मात्र रहेमा सोही स्थानीय तह, दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश स्थित सहकारी मन्त्रालय र दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेमा सहकारी बिभाग नियामक निकाय हुनेछ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाको वित्तिय विवरण प्रविष्ट गर्दाCumulative वा Accumulative कुनमा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ?
उत्तरः सहकारी संस्थाको आफ्नो वित्तिय विवरण COPOMIS मा प्रविष्ट गर्दा Accumulative मा राख्नु पर्दछ । Accumulative भन्नाले साउन महिना देखिकै रकमहरूको जोड प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिितको सदस्यले लिएको ऋण कहाँ प्रबिष्ट गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः संस्थाको सञ्चालक समितिको ऋण प्रबिष्ट गर्नु पुर्ब बार्षिक प्रतिबेदन दाखिला मेनुमा गई निर्वाचन समिति अन्तर्गतको लेखा समितिमा रहने पदहरुको सेटअप, निर्वाचन उपसमितिको पद सेटअप र निर्वाचनको प्रनतबेदन मिलाउनु पर्दछ । त्यसपछि आन्तरिक कार्यहरुमा मेनुमा गई समिति सदस्यले लिएको ऋणको बिबरणमा गई सदस्यले लिएको ऋण प्रबिष्ट गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो Password भुलेको खण्डमा के गर्नु पर्दछ ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले कुनै पनि Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) मा गई copomis.gov.np खोल्नुपर्दछ । यसरी COPOMIS खुले पश्चात आउने स्क्रिनमा 'पासवर्ड भुल्नुभयो' भनेर लगईन गर्ने वक्स मुनिबाट लेखीएको हुन्छ । उक्त 'पासवर्ड भुल्नुभयो' भन्नेOption मा क्लिक गर्नुपर्ने र संस्थाको आधिकारिक ईमेल सिष्टम बाट माग भएबमोजीम पोष्ट गरेपश्चात पासवर्ड रिकभर link सिस्टमले उक्त ईमेलमा नै पठाउनेछ । र उक्त link मा क्लिक गरेपछि नयां पासवर्ड प्रविष्ट गरी संस्थाले आफ्नो पासवर्ड पुनः प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो मासिक बिबरणहरू प्रविष्ट गरिसके पछि पनि ड्यासबोर्डमा किन देखाउदैन?
उत्तरः उक्त कार्य COPOMIS सम्बन्धि Software अन्तर्गतको कार्य हो र उक्त समस्याको समाधानको लागि Software को कार्य क्रमबद्ध रूपमा भईरहेकोछ र सो कार्य भईसके पछि जानकारी website मार्फत गरिनेछ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको कोष सम्विी विवरण कसरी राख्नु पर्दछ?
उत्तरः विभागले प्रकाशन गरेको सहकारी ऐन, २०७४ र नीयमावनलमा,२०७५ मा उल्लेख भएका कोषहरु मात्र प्रविनष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । system मा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावलीमा,२०७५ उल्लेख भएका कोषहरु बाहेक अन्य कोषहरु नहुने भएकाले सोहि नियम बमोजिम राख्नु पर्दछ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको मासिक विवरण प्रविष्ट गर्दा Balance Sheet मा भएको बिबरण कि Trial Balance मा भएको बिबरण प्रबिष्ट गर्नुपर्दछ ?
उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको मासिक विवरण प्रविष्ट गर्दा Trial Balance को आधारमा राख्नु पर्दछ । संस्थाले हरेक महिनाको COPOMIS बमोनजम Trial Balance बनाएर प्रबिष्ट गर्नुपर्दछ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको रकम प्रबिष्ट गर्दा कुन अंकमा राख्नु पर्दछ ?
उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको कुनै पनि रकम प्रविष्ट गर्दा पुरा अंकमा राख्नु पर्दछ । जस्तै १००००० पुजी प्रबिष्ट गर्दा १००००० नै प्रबिष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले नियामक निकायवाट COPOMIS को Password लगिसके पछि के गर्नुपर्दछ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले आफ्नो नियामक निकायबाट पासवर्ड प्राप्त गरिसके पछि COPOMIS को Password 'पासवर्ड भुल्नुभयो' भन्ने बटनमा क्लिक गरेर पासवर्ड परिबर्तन गर्नु पर्दछ ।
प्रश्न: सहकारी संस्थाले बित्तीय विवरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाणिकरण भए नभएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले बित्तीय विवरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाणिकरण भए नभएको थाहा पाउनका लागी COPOMIS मा प्रविष्ट गरिएको जुन आर्थिक बर्ष र महिनाको प्रमाणिकरण हेर्न खोजिएको हो सो महिना र आर्थिक बर्षमा Mouse Pointer लगेपछि प्रमाणिकरण भयो भन्ने आउंछ वा उक्त ठाउुँमा क्लिक गरेपछि पुछारमा/ तलपट्टी प्रमाणिकरण भयो भनेर लेखिएको आउंछ । यसरी प्रमाणीकरण भए नभएको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । साथै संस्थाको e-mail मा पन आउछ । यसमा संस्थालको आफ्नो e-mail आधिकारिक हुनु पर्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्दछ ।
प्रश्न: सहकारी सस्थाले बित्तीय विवरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाणिकरणका लागि कसरी पेश गर्न सक्दछन् ? ?
उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी सस्थाले बित्तीय विवरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाणिकरणका लागि Preview वटनमा गएर preview बक्समा click गरी पेश गर्न सकिन्छ ।
प्रश्नः COPOMIS बाट हटाईएका सदस्यहरुको बिबरण पुनः प्रविष्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
उत्तरः COPOMIS मा प्रबिष्ट गरिसके पछी हटाईएका सदस्यहरुको बिबरण पुन प्रबिष्ट गर्ननमल्दछ ।
प्रश्नः COPOMIS संचालन सम्बन्धि प्राबिधिक समस्या पनि गएमा के गर्ने?
उत्तरः COPOMIS एक web based Software हो । software को system मा प्राबिधिक समस्या कहिलेकाहि आउन सक्छ । यसको नियमित रुपमा Monitor र Supervision गरी Update गर्ने कायक भईराखेको हुन्छ । के नह समस्या आएमा सो समस्या सम्बन्धि जानकारीको लागि आफ्नो नियमक निकायमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । अथवा सिधै मीथ उल्लेख भए बमोनजम सहकारी बिभागमामा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
प्रश्नः COPOMIS संचालनका लागि Unicode आवश्यक छ वा छै न ?
उत्तरः COPOMIS संचालनका लागि Unicode आवश्यक छ । यसलाई नेपाल सरकारलेपनि मान्यता प्रदान गरिसके को छ ।
प्रश्नः COPOMIS संचालनका लागि संस्थाको Computer मा Minimum Net Speed कति आवश्यक पर्दछ ?
उत्तरः COPOMIS सफ्टवेयर Internet कै माध्मयमबाटसंचाल हुने हुदा यसको संचालनका लागि Minimum पनि 1 Mbps को Net आवश्यक हुन्छ ।
प्रश्नः Unicode font कसरी Download गर्नसकिन्छ ?
उत्तरः संस्थामा प्रयोग भईरहेको Computer को Web Browser(Ex. Mozilla Firefox, Google Chrome) मा www.ltk.org.np मा गई Download Tab मा क्लिक गरी Download गर्नसकिन्छ । Unicode सिक्नको बिभीन्न Youtube र Google मा भिनभिन्न सामाग्रिहरु उपलब्ध हुने हुदा सो अनुसारका सामाग्रिहरुको प्रयोग गरी कायक सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रश्नः सहकारी संस्थाको कुनै पनि बिबरण नियमक निकायलाई बुझाउनका लागि के गर्नुपर्दछ ?
उत्तरः सहकारी संस्थाको कुनै पनि बिबरण बुझाउनका लागि बुझाउन खोनजएको बिबरणको संनक्षप्त बिबरणमा गई 'प्रमाणिकरणको लागि पठाउनुहोस' भन्ने बटनमा क्लिक गरी बुझाउन सकिन्छ । त्यसपछी उक्ट विवरण कित प्रमाणिकरणको प्रनियामा छ भन्ने आउंछ वा प्रमानणीकरण भइसके पश्चात प्रमाणीकरण भयो भन्ने स्क्रिनको तलपट्टी देखिन्छ ।
प्रश्नः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्य सम्बन्धि बिबरणहरु प्रबिष्ट गर्दा सदस्यको फोटो र नागरिकता राख्नु पर्ने अनिवार्यता हो कि होईन ?
उत्तरः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्य सम्बन्धि बिबरणहरु प्रबिष्ट गर्दा सदस्यको फोटो र नागरिकता COPOMIS मा राख्नु आबश्यक हाललाई नभएको (not mandatory in system ) तर नियमक निकायले माग गरेमा प्रबिष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्नः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्यको बिबरण प्रविष्ट गर्ने क्रममा सदस्य सम्बन्धि बिबरण अपुग भएमा के गर्नुपर्दछ ?
उत्तरः सहकारी संस्थालाई आफ्नो सबै सदस्यहरुको जानकारी हुनुपर्दछ । यदि जानकारी नभएको खण्डमा उक्त संस्थामा आबद्ध सदस्यलाई सम्पर्क गरी आवश्यक बिबरण माग गरी COPOMIS मा प्रबिष्ट गर्नुआवश्यक हुन्छ ।
प्रश्नः सहकारी संस्थाहरुको बार्षिक प्रतिबेदनको अनुसूची भीत्रभएका शिर्षकहरुमा संस्थाको शिर्षकहरुमा नभेटिए के गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः अनुसुचिमाभएका शिर्षकहरु चार खाता बमोनजम हुन्छ । यसमा कुनै संस्थाको लेखा शीर्कक संस्थापिच्छे फरक हुने हुदा सोही सस्थाको लेखा शीर्षक चार खाता अनुसार मिल्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नः सहकारी संस्थाहरुले COPOMIS Access कसरी गर्न सक्दछन ?
उत्तरः सहकारी संस्थाहरुलेCOPOMISसंचालनगर्नको लागि Computer को कुनै पनि Web Browser(Eg. Mozilla Firefox, Google Chrome) मा गई copomis.gov.np टाईप गर्नुपर्दछ । त्यसपछी COPOMIS को पेज खुल्छ, साथै त्यसमा Username र Password प्रबिष्ट गर्ने Form आउछ र सो Form मा सहकारी संस्थाले आफ्नो Username र Password टाईप गरी COPOMISसंचालनगर्न सक्दछन्।
प्रश्नः सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको सदस्यको विवरण प्रविष्ट गर्दा सदस्यता नं. को क्रम संख्या वमोकजम प्रविष्ट गर्न जरुरी छ वा छै न ?
उत्तरः सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो सहकारीको सदस्यको विवरण िम संख्या वमोनजम प्रबिष्ट गर्न जरुरी छै न । जस्तैयदि रामको सदस्यता नं. १, श्यामको सदस्यता नं. २, र रीताको सदस्यता नं. ३ आदि भएमा क्रमश सदस्य संख्या राख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छै न । जसमा रीताको शुरूमा प्रबिष्ट गरेर अरुको गर्दा पनि अभिलेख सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
COPOMIS Frequently Ask Question
© 2021, Department of Co-operatives, All Rights Reserved.